Taj Hotels Palaces Resorts Safaris miteny ny fiteninao
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny » Taj Hotels Palaces Resorts Safaris miteny ny fiteninao
Desambra 26, 2017
Initially available across 45 hotels, Taj’s multilingual website facility will soon encompass all 99 hotels to reach a wider audience globally.
Ny fitaomana ny haitao amin'ny indostrian'ny hotely dia tsy mbola nalaza noho ny ankehitriny. Miaraka amin'ny ho avy avo lenta ho an'ny indostrian'ny dia, fizahan-tany ary fandraisam-bahiny, Taj Hotels Palaces Resorts Safaris dia nanangana tranokala misy fiteny maro izay manome vaovao amin'ny fiteny efatra fanampiny - Sinoa tsotra, Espaniôla, Alemanina ary frantsay.
Ho fanampin'ny tranokala lehibe, ny sehatra vaovao voafaritra amin'ny fiteny dia namboarina miaraka amina endrika hamaly tanteraka izay hahatonga ny traikefa amin'ny fikarohana an-tserasera ho tsotra kokoa amin'ny sehatra rehetra ho an'ireo mpandeha mitady hiaina ny tena fitiavana mandray vahiny. Manome fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny efitrano, tolotra hotely, toeran-kaleha, serivisy, ary ny programa tsy fivadihana Taj InnerCircle, aseho amin'ny sary an'arivony mihoatra ny 10,000 ny hotely ary manasa ireo mpitsangatsangana hitety an'izao tontolo izao miaraka amin'i Taj.
Misy amina trano fandraisam-bahiny 45 am-boalohany, ny tranokalan'ny tranonkala amin'ny fiteny maro any Taj dia hanodidina ny hotely 99 rehetra hahatratra ny mpihaino manerantany. Mifanaraka amin'ny fomban-drazany amin'ny famahana ny hetahetan'ny vahiny rehetra, ny tranokala Taj dia miantoka ny fahatsoran'ny fikarohana sy famandrihana ho an'ny vahiny, amin'ny fiteny izay safidiny.
Raha niresaka momba ny fanombohana, Andriamatoa Chinmai Sharma, Lehiben'ny tompon'andraikitra, Taj Hotels Palaces Resorts Safaris, dia nilaza hoe: "Miaraka amin'ny famoahana ny tranokalanay amin'ny fiteny maro dia tsy vitan'ny mandray tsara ny vahininay erak'izao tontolo izao izahay, fa mampiseho ny vokatra sy serivisinay koa. amin'ny fiteny tian'izy ireo. Ny votoatiny manokana sy ny faritra voafaritra manokana amin'ny fiteny dia hanampy an'i Taj Hotels hanatsara ny fisiany manerana ny tsena ary hanana ny maha-zava-dehibe azy ireo amin'ny karoka organika sy karama, sady manatsara ny fidiram-bolantsika iraisam-pirenena avy amin'ireo tsena mpamatsy sakafo manan-danja ireo. Izy io koa dia hanohana ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany izay monina any amin'ireto firenena ireto satria afaka hampiseho ny sasany amin'ireo vokatra tsara indrindra aminay amin'ny fiteny eo an-toerana izy ireo. ”